हाम्रो बारेमा - Zhejiang लीड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर कं, लिमिटेड
उद्यमहरूमा विश्वासको कमी भनेको मानिसमा विश्वासको कमीजस्तै हो। यो गर्न गाह्रो छ ठूलो उद्देश्य हासिल र दिगो सफलता प्राप्त। चाहे यो व्यापार उद्योग हो रणनीति वा संगठनात्मक पुनर्संरचना, प्राय सबै परिवर्तनहरू सामान्यमा निर्भर गर्दछ, स्पष्ट विश्वास र सांस्कृतिक प्रणाली। वास्तवमा स्थापना वा कर्पोरेट मान्यताहरूको परिवर्तन रणनीतिक रूपान्तरणको आवश्यकताको आधारमा उद्यमीले आरम्भ गरेको हुन्छ र सेवा गर्दछ
को एक रणनीतिक रूपान्तरण को रूप मा।
यहाँ, तपाईं हाम्रो विकास प्रदर्शन हेर्न र हाम्रो पछिल्लो घटनाक्रमहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाइँसँग बाँड्न पनि धेरै इच्छुक छौं बढ्दो अनुभवको मजा लिनुहोस् विश्वभर मा हाम्रा साझेदारहरु संग मिलेर। अवश्य पनि, तपाईं हाम्रो जिम्मेवारी देख्न सक्नुहुन्छ र जिम्मेवारी। व्यापार र स्टाफको पछिल्लो समयमा सँगै बढ्नको खोजीमा, हामी सँधै दिगो विकासको मार्गमा हिंड्छौं र सक्रिय रूपमा सामाजिक मान्छौं जिम्मेवारी, उत्साही सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक वापसी।
यहाँ, तपाईं हाम्रो दर्शन पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अस्वस्थ रूपमा "दुई वित्तीय, तीन नयाँ, पाँच, Tillion "रणनीतिक उद्देश्यहरू, मात्र निरन्तर रूपान्तरण प्राप्त गर्न प्रयास गर्न र नयाँ सामान्य अन्तर्गत चीनको अर्थव्यवस्थाको स्तरवृद्धि, तर अवसरहरू साझा गर्न उनीहरूको वैश्विक समकक्षहरूको साथ, सँगै विकास गर्नुहोस्।
मान सिर्जनाबाट आउँदछ! हामी तपाईंलाई सँगै भविष्य सिर्जना गर्न आमन्त्रित गर्दछौं!
सुरक्षित र वातावरणीय मैत्री पम्प र प्रणालीको विकासमा फोकस गर्नुहोस् र सबै सरोकारवालाहरूको लागि मूल्य सिर्जना गर्नुहोस्।
चिनियाँ पम्प र प्रणाली उद्योगको छवि बढाउनुहोस्, यस उद्योगमा दिगो विकासशील अग्रणी कम्पनी हुँदै।
कोर्राईभ कोर मूल्य
VIRTUE का साथ व्यवसाय चलाउनुहोस्, PERFECTION को साथ सफलताको पछि लाग्नुहोस्, EFFICIENCY को साथ जीत जित्नुहोस्, सहि कार्यहरूको साथ जानुहोस्।
उत्साह, उदारता, आशावाद र महत्वाकांक्षाको चरित्रको साथ सिंह छवि लीड्राइभको राशि सन्दर्भमा आधारित एक शुभंकरको रूपमा सिर्जना गरिएको छ।
झेजियांग लिड्राइभ इलेक्ट्रिक मोटर कं, लिमिटेड Taizhou मा स्थित छ - एक ऊर्जावान पालना Zhejiang प्रान्त मा निजी अर्थव्यवस्था को लागी शहर, र ठूलो आर्थिक मा निर्भर यांग्त्जे नदी डेल्टाको सर्कल, झेजियांग लिड्राइभ इलेक्ट्रिक मोटर कं, लिमिटेड (यस पछि) "ट्रिपो मोटर" भनिन्छ) सँग राम्रो भौगोलिक वातावरण छ। हुआंग्यान एयरपोर्ट केवल २ किलोमिटर टाढा र हाईमेन पोर्ट १० किलोमिटर टाढा रहेको, कम्पनी सुविधाजनक भूमि-पानी-एयर-ट्रान्सपोर्टेशनको मजा लिन्छ। यसको नवीन प्रबन्धनको साथ टोली, आधुनिकीकरण प्रबन्धन प्रणाली, उच्च-गुणवत्ता स्टाफ, उपभोग उत्पादन सुविधाहरू, पूर्ण परीक्षण उपकरणहरू, शक्तिशाली प्राविधिक बल, विश्वसनीय उत्पादन गुणस्तर, उत्तम निर्माण प्रक्रिया, उत्तम गुण प्रणाली, उन्नत R&D क्षमता र व्यावसायिक बिक्री टोली, लीड्राइभ मोटर्स एक बढ्दो तारा बन्न पुगेको छ चीन मोटर उद्योगमा। यो बिक्री नेटवर्क लगभग २० प्रान्तहरुमा फैलिएको छ र देश भरका शहरहरू। यसको ब्रान्ड प्रभाव सबैलाई प्रभावित गरिएको छ cusomers को मनपर्दो चयन भएको छ र राम्रो प्रतिष्ठा जितेको छ प्रयोगकर्ताहरू बीच।
लीड्राइभ मोटर निर्माण, अनुसन्धान र विभिन्न प्रकारको बिक्री मा विशिष्ट छ मोटर्स को। यसका उत्पादनहरूमा series-ph एसिन्क्रोनस मोटर्स suchas Y को विभिन्न श्रृंखला समावेश छ। YE2, YE3, YD, YEJ, YVP र अन्य व्युत्पन्न विशेष मोटर्स। समान राष्ट्रिय स्यान्डर्ड अपनाउने र आईईसी स्टन्डर्ड्समा पावर दर र माउन्टिंग आयामको साथ, यसको उत्पादनहरूसँग उच्च दक्षता, उच्च सुरूवात टोक़, कम आवाज स्तर कम कम्पन, र उच्च विश्वसनीयता। उत्पादनहरू EU को लागि CE CONFORMITY अनुपालन गर्न मूल्या been्कन गरिएको छ देशहरू र CCC र CQC प्रमाणित। कम्पनीले IS09001 इन्टरमेन्टल हासिल गरेको छ गुणस्तर प्रणाली अनुकूलता। लीड्राइभ मोटर आफैंको लागि अनुकूलित समाधानको लागि प्रतिबद्ध गर्दछ दर्जी मार्किंग विशेष अनुकूलित द्वारा औद्योगिक र विद्युत अनुप्रयोगमा प्रयोगकर्ताहरू मोटर्स।
नवीनता र अखण्डता हाम्रो सिद्धान्त हो। अनुकूलनयोग्य र लचिलोपन हाम्रो फाइदा हो। हाम्रो लक्ष्य विश्वव्यापी इलेक्ट्रिक मोटर्सको क्षेत्रमा मेड इन चाइनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। "सत्यनिष्ठको साथ ग्राहकहरु संग व्यवहार र गुणवत्ता संग बजार जीत" को विचार मा अडिग रहनुहोस्। र घर र aborad दुबै ग्राहकहरु को बदलती मांग को पूरा गर्न, हामी "लिड्राइभ मोटर" ब्रान्ड सिर्जना गर्नका लागि समर्पित छन् र यो चीनलाई पनि थाहा गराउँदछ संसारमा। हाम्रो निष्ठा र बुद्धिमत्ताको साथ, हामी सँगै एक उज्जवल भविष्यको लागि प्रतीक्षा गर्दछौं तिमीसँग।